Akụkọ - Stick ịgbado ọkụ Usoro Intro
SMAW (Shielded Metal Arc ịgbado ọkụ) na-akpọkarị osisi ịgbado ọkụ. Ọ bụ otu n'ime usoro ịgbado ọkụ kachasị ewu ewu taa. Ihe ewu ewu ya bụ n'ihi ntụgharị nke usoro na ịdị mfe na ọnụ ala nke akụrụngwa na arụ ọrụ. A na-ejikarị SMAW eji ihe ndị dị ka nchara dị nro, nkedo ígwè, na igwe anaghị agba.
Olee otú Stick ịgbado ọkụ Ọrụ
Stick ịgbado ọkụ bụ akwụkwọ ntuziaka ịgbado ọkụ usoro. Ọ chọrọ electrode na-eripịa nke etinyere na mbubata iji dọọ weld ahụ, a na-ejikwa eletrik eletrik iji mepụta arc eletriki n'etiti electrode na ọla ndị a na-agbanye ọnụ. Mmiri eletrik nwere ike ịbụ ma ọ bụ nke ọzọ ma ọ bụ nke dị ugbu a site na ike ịgbado ọkụ.
Ka a na-edozi weld ahụ, mkpuchi mkpuchi nke electrode na-agbasasị. Nke a na - emepụta vapo na - enye gas na - echebe na oyi akwa slag. Ma gas na slag ahụ na-echebe ọdọ mmiri weld site na mmetọ ikuku. Thegba mmiri ahụ na-ejekwa ozi iji tinye ndị na-ekpocha ihe, ndị na-egbu mmiri, na ihe ndị na-eme ka mmiri dị na weld.
Electrodes na-ekpuchi Flux
Nwere ike ịchọta electrodes na-agbanwe agbanwe n'ọtụtụ diameters na ogologo. A, mgbe ị na-ahọrọ ihe electrode, ị chọrọ ka dakọtara na electrode Njirimara na isi ihe. Electrodị electrode nke a na-ekpuchi ọkụ na-agụnye ọla kọpa, ọla kọpa, ígwè dị nro, igwe anaghị agba nchara, na nickel.
Ejiji eji nke Stick ịgbado ọkụ
SMAW bụ ihe a ma ama n'ụwa niile na ọ na-achịkwa usoro ịgbado ọkụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ mmezi na ndozi. A na-ejikwa ya eme ihe n'ọtụtụ ebe na mmepụta ụlọ na nwube nke ihe eji arụ igwe, ọ bụ ezie na ịgbado ọkụ na-agbanye ọkụ na-enweta ewu ewu na mpaghara ndị a.
Àgwà ndị ọzọ nke Stick ịgbado ọkụ
Njirimara ndị ọzọ nke Shielded Metal Arc Welding gụnyere:
Ọ na-enye mgbanwe ọnọdụ niile
Ọ naghị echebara ikuku na drafts echiche
Dị mma na ọdịdị nke weld dị iche iche dị ka nkà nke onye ọrụ ahụ
Ọ na-enwekarị ike ịmepụta ụdị nkwonkwo anọ dị iche iche: nkwonkwo butt, nkwonkwo ụkwụ, nkwonkwo T, na weld fillet